ငွေ(၁၅)သိန်းလောက်ကုန်တာတောင်မပျောက်တဲ့ သားအိမ်အကြိတ်ကို သင်္ဘောဖိုပင်အစွမ်းကြောင့်ပျောက်ကင်း - PS Myanmar
အစာအိမ်ဖြစ်တဲ့သူတွေလဲသောက်နိုင်ပါတယ်အရမ်းကောင်းပါတယ်။အဖိုပင်ပါ သူ့အမြစ်ကို သကြားနဲ့ရောပြုပ်ပြီးစားရင် အသည်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။
အကြမ်းပန်ကန်လုံးနဲ့မနက်တခွက်ညတခွက်သောက်ပေးပါတပါတ်အတွင်းသိသာလာလိမ့်မယ်….အဖိုပင်ပါ သူ့အမြစ်ကို သကြားနဲ့ရောပြုပ်ပြီးစားရင် အသည်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။သဘောပင်အဖိုအမသိချင်ရင်အမြစ်အဖျားကိုကြည့်ပါ အမြစ်အခွပါရင်အမ အခွမပါရင်အဖို ။
ကျနော်ကတော့သင်္ဘောရွက်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို ပြုတ်လည်းစားတယ် ….မီးမြှိုက်ပြီးလည်း ရေစင်စင်ဆေး ငပိချက်နဲ့တို့စားပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့ကျနော်ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါအစာအိမ်ဝေဒနာလံုးဝမရှိပါကြောင်း တဲ့ဗျာ…..။
ကလေးမလေးမှာ ရောဂါထက် ပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခက်မှု့ဒဏ်ကြောင့် ခုခံအားကျဆင်းလာပြီး တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိန်ခြုံးချိလာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ မဖြစ်တဲ့ အဆုံးမှာ ဆေးရုံကို စတင်ပြီးတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရာကနေကလေးမလေးမှာ စဖြစ်ဖြစ်ချင်း ရောဂါနုပေမဲ့
မိဘတွေရဲ့ ပေါဆမှု့ကြောင်း ရောဂါရင့်ကြပ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သအိမ်ထဲမှာ အကြိတ်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီးဆိုတာ စစ်ဆေးချက်ထွက်လာပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ စဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဓတ်ကင်ရတာနဲ့ ဘာနဲ့ဆိုတော့ ကလေးမလေး ခေါင်းမှာလဲ ဆံပင်တွေ က မယ်သီလရှင် ခေါင်းတိုင်းဖြစ်နေပါတော်သည်။အစ ပထမပတ်တက်ရင်းနဲ့ကိုငွေ ၁၀သိန်းကျော်လောက်ကုန်ခဲ့ပါပြီး အခြေခံလူတန်းစားဆိုတော့နဲနဲငွေအင်းအားလဲ ချိနေပြီးရှာနေရပါပြီး။
ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်လပတ်ကြာတော့ ဓတ်ဒုတိယအကြိမ် ကင်ရတော့မဲ့အချိန်မှာ . မိခင်မှာ သူတွက် ငွေးတိုး ၁၅သိန်းချီးလာပြီးဆိုတာ ကောင်မလေးကလဲ သိနေပါတော့သည်။
ဆရာဝန်ကြီးကလဲ ပျောက်မယ်ဆိုတာ အာမခံကုသာကုနေရတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံကပြန်လာတော့ အခြေမဟန် ဆက်ကုဖို့လဲငွေအားကမနိုင်ဆိုတော့ သမီးလေးမှာ အမေရယ်..သမီးမခံစားနိုင်တော့ဘူးသမီးကို မကုပါတော့နဲ့ သမီးအသေသာခံလိုက်ပါတော့မည်ဆိုပြီးငိုပါလေရောလား။
ကျွန်တော် လဲ အဲ့အသံကြား Facebook ပေါ်က သဘောင်္ရွက်အကြောင်းက စာဖတ် ဒီလိုနဲ့ သွားတိုင်ပင်တယ်။
ဒီလိုဒီလိုတော့ရှိတယ် ကျွန်တော့် ကိုယုံလို့ရင်ကျွန်တော် ပြောတဲ့ ဆေးနည်းကိုသောက်မှာလား ကျွန်တော် ရှာပေးမယ်ဆိုတော့ ။
မအေကမလုပ် သမီးကတော့အကိုရယ် ကျမသေလူပဲ အကိုဘာနေနေ သမီးအဆင်ပြေမယ်ဆိုသောက်ပါမယ်လို့ ကောင်မလေးက ခတ်ချိချိလေးနဲ့ ကတုံးလေးပြောရှာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် ဈေးရောင်းသွားရင်.ကုသိုလ် နေစဉ်ရအောင် သင်္ဘော(အဖို)ရောက်လေအရပ်တိုင်းရှာခူးပါတော့တယ်၊။
သင်္ဘောရွက် (အဖို) ကို ငရုတ်ဆုံထဲ ထည့်ထောင်းပြီး အဖတ်ကို ပိတ်ဖြူထဲထည့် အရည် သီးသန့်ဖြစ်အောင် ညှစ်ချပြီး
တနေ့ (အကြမ်းပန်းကန်လုံး) ၁ခွက် ကနေ ၂ ခွက် အများဆုံး သောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ၁၅ရက်ကြာတော့ ကောင်မလေး ဆံပင်တစ်ပင်နှစ်ပင်စပေါက်လာတာကို ကျွန်တော် သတိထားမိလာပါတယ်။
အစားကလဲ လူသာပိန်နေပေမဲ့ ဘယ်အစားအစားမှမရှောင်တော့ပါဘူး။နောက်တစ်လလောက်နေတော့ လူက ပြည့်ပြည့်၀၀ နဲနဲဖြစ်လာတော့ ကောင်မလေးက ဆေးရုံကိုတစ်ခေါက်လောက်သွားချင်နေပါတော့တယ်။
သူသွားချင်တဲ့အကြောင်းရင်းက သူရောဂါအခြေနေကို သိချင်နေတဲ့ ဆန္ဒ ပြင်းပြရင်မနက်ဆေးရုံသွား ချက်ချင် ဆရာဝန်ကလဲ အန့်တွေအော ကျွန်တော် ဖို့လဲ မုန့်တွေဝယ်လာပြီး
အကို တဲ့ ကျမ အကြိတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ ဆရာက ဘာဆေးတွေသောက်တာလဲ မေးနေတယ်တဲ့ ။ကျွန်တော် ဗျာ ဝမ်းသာလိုက်တာ ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့ သေမင်းရောဂါသယ်က ပျောက်ကင်းသွားတော့ဘဝမှာ အတော်ကို ပီတိဖြစ်တဲ့နေ့ပဘဲ
ဒါကြောင့် သင်္ဘောရွက်သည် ထိုရောဂါတစ်ခုထဲကိုသာပျောက်စေတာမဟုတ်ပဲ အမျိုးမျိုးသော အရာဆဲလ်တွေအမြစ်တွေကိုခြေနိုင်စွမ်းရှိတာမို့
ကင်ဆာသမားတွေအထူးသင့်တော်တယ်လို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော် လိုက်ရပါတယ်။စာမရေးတတ်လို့အမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ပါ။
ငှေ(၁၅)သိနျးလောကျကုနျတာတောငျမပြောကျတဲ့ သားအိမျအကွိတျကို သင်ျဘောဖိုပငျအစှမျးကွောငျ့ပြောကျကငျး
အစာအိမျွဖွဈတဲ့သူတှလေဲသောကျနိုငျပါတယျအရမျးကောငျးပါတယျ။အဖိုပငျပါ သူ့အမွဈကို သကွားနဲ့ရောပွုပျပွီးစားရငျ အသညျးရောဂါပြောကျပါတယျ။
အကွမျးပနျကနျလုံးနဲ့မနကျတခှကျညတခှကျသောကျပေးပါတပါတျအတှငျးသိသာလာလိမျ့မယျ….အဖိုပငျပါ သူ့အမွဈကို သကွားနဲ့ရောပွုပျပွီးစားရငျ အသညျးရောဂါပြောကျပါတယျ။သဘောပငျအဖိုအမသိခငျြရငျအမွဈအဖြားကိုကွညျ့ပါ အမွဈအခှပါရငျအမ အခှမပါရငျအဖို ။
ကနြျောကတော့သင်ျဘောရှကျလတျလတျဆတျဆတျကို ပွုတျလညျးစားတယျ ….မီးမွှိုကျပွီးလညျး ရစေငျစငျဆေး ငပိခကျြနဲ့တို့စားပါတယျထူးခွားခကျြကတော့ကနြျောဝမျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ရောဂါအစာအိမျဝဒေနာလံုးဝမရှိပါကွောငျး တဲ့ဗြာ…..။
ဆေးကုသိုလျ ရှယျပေးပါ.မိမိ ပတျဝနျးကငျြသိရအောငျ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ကွုံခဲ့ရတဲ့သင်ျဘောရှကျအစှမျး ကြှနျတျော အိမျဘေးက ၂၂နှဈအရှယျ ကလေးမလေးရောဂါစဖွဈပါတယျ။သူတို့စဖွဈတဲ့ ရောဂါဟာ ဗိုကျမှာ ဘာရယျမသိတဲ့ အလုံးလေးစတညျလာပါတယျ။
အဲ့မှာ တောဓလေ့ မွနျမာပီပီအခြို့က ဗိုကျကွီးတယျပွောလို့ပွော လငျပွောရမှာရှကျတာနမှောဆိုလိုဆိုနဲ့မိဘတှကေလဲရိုးခကျြသားသမီးကိုမယုံပဲ သူမြားပွောစကားနဲ့ ကလေးမလေးကို စတငျပွီး မကွညျပါတော့တယျ။
ကလေးမလေးမှာ ရောဂါထကျ ပတျဝနျးကငျြရိုကျခကျမှု့ဒဏျကွောငျ့ ခုခံအားကဆြငျးလာပွီး တဈနထေ့ကျ တဈနေ့ ပိနျခွုံးခြိလာပါတော့တယျ။ဒီလိုနဲ့ မဖွဈတဲ့ အဆုံးမှာ ဆေးရုံကို စတငျပွီးတကျဖို့ ဆုံးဖွတျရာကနကေလေးမလေးမှာ စဖွဈဖွဈခငျြး ရောဂါနုပမေဲ့
မိဘတှရေဲ့ ပေါဆမှု့ကွောငျး ရောဂါရငျ့ကွပျနခေဲ့ပါပွီ။ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံတငျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ သအိမျထဲမှာ အကွိတျကငျဆာဖွဈနပွေီးဆိုတာ စဈဆေးခကျြထှကျလာပါတော့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ စဆေးရုံတငျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ဓတျကငျရတာနဲ့ ဘာနဲ့ဆိုတော့ ကလေးမလေး ခေါငျးမှာလဲ ဆံပငျတှေ က မယျသီလရှငျ ခေါငျးတိုငျးဖွဈနပေါတျောသညျ။အစ ပထမပတျတကျရငျးနဲ့ကိုငှေ ၁၀သိနျးကြျောလောကျကုနျခဲ့ပါပွီး အခွခေံလူတနျးစားဆိုတော့နဲနဲငှအေငျးအားလဲ ခြိနပွေီးရှာနရေပါပွီး။
ဒီလိုနဲ့ နောကျတဈလပတျကွာတော့ ဓတျဒုတိယအကွိမျ ကငျရတော့မဲ့အခြိနျမှာ . မိခငျမှာ သူတှကျ ငှေးတိုး ၁၅သိနျးခြီးလာပွီးဆိုတာ ကောငျမလေးကလဲ သိနပေါတော့သညျ။
ကြှနျတျော လဲ အဲ့အသံကွား Facebook ပျေါက သဘောင်ျရှကျအကွောငျးက စာဖတျ ဒီလိုနဲ့ သှားတိုငျပငျတယျ။
ဒီလိုဒီလိုတော့ရှိတယျ ကြှနျတေျာ့ ကိုယုံလို့ရငျကြှနျတျော ပွောတဲ့ ဆေးနညျးကိုသောကျမှာလား ကြှနျတျော ရှာပေးမယျဆိုတော့ ။
မအကေမလုပျ သမီးကတော့အကိုရယျ ကမြသလေူပဲ အကိုဘာနနေေ သမီးအဆငျပွမေယျဆိုသောကျပါမယျလို့ ကောငျမလေးက ခတျခြိခြိလေးနဲ့ ကတုံးလေးပွောရှာပါတယျ။ဒီလိုနဲ့ ကြှနျတျော ဈေးရောငျးသှားရငျ.ကုသိုလျ နစေဉျရအောငျ သင်ျဘော(အဖို)ရောကျလအေရပျတိုငျးရှာခူးပါတော့တယျ၊။
သင်ျဘောရှကျ (အဖို) ကို ငရုတျဆုံထဲ ထညျ့ထောငျးပွီး အဖတျကို ပိတျဖွူထဲထညျ့ အရညျ သီးသနျ့ဖွဈအောငျ ညှဈခပြွီး
တနေ့ (အကွမျးပနျးကနျလုံး) ၁ခှကျ ကနေ ၂ ခှကျ အမြားဆုံး သောကျခဲ့ပါတယျ။ဒီလိုနဲ့ ၁၅ရကျကွာတော့ ကောငျမလေး ဆံပငျတဈပငျနှဈပငျစပေါကျလာတာကို ကြှနျတျော သတိထားမိလာပါတယျ။
အစားကလဲ လူသာပိနျနပေမေဲ့ ဘယျအစားအစားမှမရှောငျတော့ပါဘူး။နောကျတဈလလောကျနတေော့ လူက ပွညျ့ပွညျ့၀၀ နဲနဲဖွဈလာတော့ ကောငျမလေးက ဆေးရုံကိုတဈခေါကျလောကျသှားခငျြနပေါတော့တယျ။
သူသှားခငျြတဲ့အကွောငျးရငျးက သူရောဂါအခွနေကေို သိခငျြနတေဲ့ ဆန်ဒ ပွငျးပွရငျမနကျဆေးရုံသှား ခကျြခငျြ ဆရာဝနျကလဲ အနျ့တှအေော ကြှနျတျော ဖို့လဲ မုနျ့တှဝေယျလာပွီး
အကို တဲ့ ကမြ အကွိတျမရှိတော့ဘူးတဲ့ ဆရာက ဘာဆေးတှသေောကျတာလဲ မေးနတေယျတဲ့ ။ကြှနျတျော ဗြာ ဝမျးသာလိုကျတာ ကိုယျကူညီလိုကျတဲ့ သမေငျးရောဂါသယျက ပြောကျကငျးသှားတော့ဘဝမှာ အတျောကို ပီတိဖွဈတဲ့နပေ့ဘဲ
ဒါကွောငျ့ သင်ျဘောရှကျသညျ ထိုရောဂါတဈခုထဲကိုသာပြောကျစတောမဟုတျပဲ အမြိုးမြိုးသော အရာဆဲလျတှအေမွဈတှကေိုခွနေိုငျစှမျးရှိတာမို့
ကငျဆာသမားတှအေထူးသငျ့တျောတယျလို့ တိုကျတှနျးနှိုးဆျော လိုကျရပါတယျ။စာမရေးတတျလို့အမှားပါရငျခှငျ့လှတျပါ။